Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: February 2011
တပ်သားတစ်ဦးလျှင်ဝင်ဝင်ခြင်းကျပ် ၁၆၀၀၀=$15 (တစ်နှစ် =ကျပ်၁၉၂၀၀၀)သတ်မှတ်ထားသည်၊နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိလာပါက ၂၁၀၀၀ ($20 နဲ.ညီမျှ)၊(တစ်နှစ်=၂၅၂၀၀၀)ဖြစ်သည်၊
ဒုတပ်ကြပ်ကတော့ ၂၂၀၀၀ မှသက်တမ်းကြာလာပါက ၂၇၀၀၀ တဲ့
တပ်ကြပ်ကတော့ ၂၈၀၀၀ မှသက်တမ်းကြာလာပါက ၃၃၀၀၀ တဲ့
တပ်ကြပ်ကြီးကတော့ ၃၄၀၀၀ မှ သက်တမ်းကြာလာပါက ၃၉၀၀၀ တဲ့
တပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီးကတော့ ၄၀၀၀၀ မှ ၄၅၀၀၀ တဲ့
ဒုအရာခံဗိုလ်ကတော့ ၄၆၀၀၀ မှ ၅၁၀၀၀ တဲ့
အရာခံဗိုလ်ကတော့ ၅၂၀၀၀ မှ ၅၇၀၀၀ တဲ့
ဒုဗိုလ်ကတော့ ၁ သိန်း
ဗိုလ်ကတော့ ၁ သိန်း နှစ်သောင်း
သုံးပွင့်အဆင့်ဗိုလ်ကြီးကတော့ ၁ သိန်း ၃ သောင်း မှသက်တမ်း နှစ်နှစ်ရှိပါက ၁ သိန်း ၄ သောင်း တဲ့
ဗိုလ်မှူးကတော့ ၁ သိန်း ၅ သောင်း မှ ၁ သိန်း ၆ သောင်း
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ၁ သိန်း ၇ သောင်းမှ ၁ သိန်း ၈ သောင်းတဲ့
ဗိုလ်မှူးကြီး ကတော့ ၁ သိန်း ၉ သောင်း မှ ၂ သိန်းတဲ့ (ဒေါ်လာငွေ ၂ ရာပေါ့ကွာ၊အမ် သင်္ဘောသားလုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ)
ဗိုလ်မှူးချုပ်ကတော့ ၃ သိန်း
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ ၄ သိန်း
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတော့ ၆ သိန်း၊
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတော့ ၈ သိန်း
ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကတော့ ၁၀ သိန်းတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကျတော့ ကျပ် ၁၂ သိန်းတဲ့၊
သတင်း Joke, မှတ်တမ်း Record
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်ရှိနေနိုင်ရေးအတွက်အာဏာသုံးရပ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားရမည်၊အာဏာသုံးရပ်ဆိုသည်မှာအုပ်ချုပ်မှုအာဏာ(executive power) ဥပဒေပြုအာဏာ(Legislative power) တရားစီရင်ရေးအာဏာ (judicial power)ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်၊ဤအာဏာသုံးရပ်သည်တစ်ခုနဲ.တစ်ခုအကြားကျူးကျော်စွက်ဖက်မှုကိုတားဆီးထားရမည့် Check and Balance ရှိရမည်၊အာဏာညီမျှစွာကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသည်၊အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည်သမ္မတ၊ဒုသမ္မတနှင့်ကက်ဘိနက်အဖွဲ.မှဆင်းသက်လာသည်၊ဥပဒေပြုအဖွဲ.မှပေးပို.လာသည့်ဥပဒေတစ်ရပ်အတည်ပြုခြင်း၊ငြင်းပယ်ခြင်းကိုသမ္မတကဗီဒိုအာဏာဖြင့်အတည်ပြုခွင့်၊ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်၊ဥပဒေပြုအာဏာသည်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များ၊အထက်လွှတ်တော်များမှာရှိသည်၊ဤဥပဒေပြုအဖွဲ.မှရေးဆွဲပြင်ဆင်ထားသည့်ဥပဒေများကိုကွန်ကရက်မှတစ်ဆင့်သမ္မတဆီတင်ပြရမည်၊တရားစီရင်ရေးအာဏာအဖွဲ.သည်ကွန်ကရက်မှအတည်ပြုထားသည့်ဥပဒေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ရှင်းပြခြင်း၊တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအလုပ်များကိုလုပ်သည်၊တရားသူကြီးအဖွဲ.သည်နိုင်ငံ၏ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းရွေးချက်တင်မြောက်ထားပြီးလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခံရသည်၊လိုအပ်သည့်တရားသူကြီးအရေအတွက်ကိုကွန်ကရက်မှရွေးချယ်တင်မြှောက်၇မည်၊ဤအဖွဲ.သည်တရားရုံစနစ်လည်ပတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊
၁၊အစိုးရကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အနေနဲ.တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ငြင်းပယ်ခြင်း (Refusal )လုပ်ရမည်၊အခွန်ငွေများမဆောင်ရန်၊အလုပ်မဆင်းရန်၊ကိုယ့်ထူကိုယ့်ထစနစ်တည်ဆောက်ရန်၊နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးရပ်တန်.ရန်၊သူတို.ဆီတစ်ခုခုတောင်းဆိုခြင်းများကိုရပ်တန်.ရမည်၊(ဆွေးနွေးချင်တယ်၊အဖွဲ.အစည်းတည်ရှိခွင့်ပေးပါ၊လှုပ်ရှားမှုခွင့်ပေးပါစသည့်လုပ်ရပ်များကိုဆိုလိုသည်)
ဆန္ဒပြပြည်သူများအထဲမှာပညာတတ်လူတန်းစားသံအမတ်မိသားစုနှင့်ပတ်သက်တဲ့သူများပါဝင်နေတယ်၊ပစ်သတ်ခံသေဆုံးသည့်အထဲမှာလည်ဘင်္ဂလာဒျေ.သံအမတ်မိသားစုများပါဝင်သည်၊ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလစ်ဗျားဒုသံအမတ်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပေးဖို.တောင်းဆိုရာမှာကုလဆိုင်ရာလက်ရှိလစ်ဗျားလစ်ဗျားကိုယ်စားလှယ်များကထာက်ခံသည်၊Ibrahim Dabbashi'၏အဆိုကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ.ကဒါဖီး၏အနှစ် ၄၀ အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်၇န်နှင့်နိုင်ငံတကာများဝင်ရောင်စွက်ဖက်ပေး ၇န်တောင်းဆိုသည်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလာဒျေ်၊၊တရုတ်၊အာရပ်နိုင်ငံအဖွဲ.ချုပ်နိုင်ငံများမှလစ်ဗျားသံအမတ်များနှုတ်ထွက်ကြပါပြီ၊အမေရိကန်ရှိလစ်ဗျားသံအမတ်က သူအနေနဲ.ကောင်းသောအစိုးရဘက်မှာသာသူရှိနေပြီးလူသတ်တဲ့အစိုးရဘက်မှာသူမပါသောကြောင့်သူနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး၊သို.သော်ကဒါဖီးချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ဖို.တောင်းဆိုသည်၊လူသတ်တဲ့အစိုးရကိုကျနော်ဘယ်လို.မှထောက်ခံလို.မရဘူး၊ကျနော်မျက်စိရှေ.မှာမြင်းတဲအတိုင်းဆိုလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ကုလဆိုင်ရာလစ်ဗျားဒုသံအမတ်ကလည်းသူနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး၊သူကအာဏာရှင်ကိုဝန်ထမ်းလုပ်ဖို.မဟုတ်ဘူး၊လစ်ဗျားပြည်သူကိုဝန်ထမ်းလုပ်နေတာပါလို.ပြောနေပါသတဲ့၊ကဒါဖီးလုပ်ရပ်ဟာလစ်ဗျားပြည်သူကိုစစ်ရေးကြေညာတာပဲ၊လစ်ဗျားပြည်သူကိုကဒါဖီးကလူမျိုးတုံသတ်ဖြတ်နေတာပဲလို.သတင်းထောက်တွေကိုသူပြောခဲ့တယ်၊တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာလစ်ဗျားသံအမတ်ကကဒါဖီကိုစကားပြောရာမှာ ကစားပွဲကပြီးသွားပြီ၊ခင်ဗျားနှုတ်ထွက်ပါ၊ခင်ဗျားအေစ္စရေကိုသွားပါ၊ခင်ဗျားပြည်သူကအာရပ်မဟုတ်ဘူး၊မလေရှားရှိလစ်ဗျားသံရုံကကဒါဖီးကို ဘာဘာရား ယမမင်းလူသတ်သမားလို.ခေါ်ဝေါသုံးစွဲပြီးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြည်သည်၊ကုလဆိုင်ရာဒုသံအမတ်ဒက်ဘရှီးက နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံကိုကဒါဖီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူသားအပေါ်ရာဇာဝတ်မှုကိုစစ်ဆေးပေးဖို.နှင့်သူ ၄၂ နှစ်ကြာအာဏာရှင်ဆန်းဆန်းအုပ်ချုပ်မှုကာလတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုများကိုပါစစ်ဆေးပေးဖို.တောင်းဆိုသည်၊ထို.အပြင်၊အကယ်၍ကဒါဖီးထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲလက်မခံဖို.၊သူငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို.တောင်းဆိုထားသည်၊At the U.N., Dabbashi urged the international community to establish safe passage for medical supplies from neighboring Tunisia and Egypt to get across the borders to Benghazi, Libya's second-largest city, which protesters claimed to control after heavy fighting.
Dabbashi said Gadhafi needed to be brought before the court to answer not only for "the genocide he is committing now" but also for "all the other crimes he has committed during the 42 years in power."
သတင်း Articles, သတင်း။ News
နက် ၂ နာရီမှာကွယ်လွန်သွားသည်ဟုသိရှိရပါသည်၊
ဗိုလ်မှူးထာဝရသည်စစ်တိုက်ရာမှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးသူဦးစီးတဲ့တပ်ရင်းနဲ.တိုက်ပွဲဖြစ်သည်.ရန်သူတပ်ကိုသူ.နာမည်အော်ပြလိုက်တာနဲ.ရန်သူကထွက်ပြေးခဲ့သည်ဟူသောတင်စားခံခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်၊ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများနဲ.ထပ်တူထပ်မျှကြေးကွဲဝမ်းနည်း ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအသံမှပြောကြားပါသည်
ဓါတ်ပုံများအတွက် Awe Mon ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
ချင်းအမျိုးသားနေ.ကျင်းပရခြင်း၏နောက်သမိုင်းကြောင်းသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ဖလမ်းမြို.နယ်မှာမတူကွဲပြားနေသည့်ချင်းအမျိုးအနွယ်များစုစည်းတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်မှာချင်းကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း(၅၀၀၀)ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်၊အဲဒီအချိန်မှစတင်၍ချင်းအမျိုးသားများတစ်စုတစည်းထဲဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်၊ဤနေ.ထူးနေ.မြတ်ကိုအစွဲပြုပြီးချင်းအမျိုးသားနေ.လို.သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။
ကေအိုင်အိုထိန်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်သည့်မန်းဝင်မြို.နယ်တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ရှိတပ်ရင်းအမှတ် ၂၇၊စင်ပေါ်မြို.နယ်တပ်မဟာ ၂လက်အောက်ရှိတပ်ရင်းအမှတ်၅နဲ.ဒနိုင်းမြို.နယ်ဟူးကောင်တောင်ကြားတပ်ရင်းအမှတ်၁၄တစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်သမားတပ်များမှစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာပြီးကေအိုင်အိုထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေသထဲသို.ကျူးကျော်ဝင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်၊အကယ်၍နယ်ကျွံဝင်ရောက်လာပါကအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဒေသခံများကပြောဆိုနေကြသည်ဟုကချင်းသတင်းဌာနမှာေ၇းသားထားပါသည်၊
အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကနေလူမှုရေးအသင်းကြံ.ဖွတ်ဖြစ်လာတယ်၊ကြံ.ဖွတ်အသင်းကနေကြံ.ဖွတ်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်လာတယ်၊ ကြံ.ဖွတ်ပါတီကနေအစိုးရအမည်ခံသမ္မတ၊ဝန်ကြီးချုပ်များဖြစ်လာတယ်၊အရောင်လေးရောင်ပြောင်းတတ်တဲ့ပုပ်သင်းညိုအမျိုးအစား စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်၊ဘာမှမထူးဘူး၊ဒီအပုပ်ထဲကနေဒီပဲတွေပဲ။
ျRoss Dunkley သည်မြန်မာတိုင်းမ်သတင်းစာတည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ.ကိုဗမာစစ်အစိုးရကဒီကနေ.ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါသည်၊သူကိုဖမ်းဆီးရခြင်းအကြောင်းသည်မသဲမကွဲဖြစ်ပေမဲ့မူးယစ်ဆေးဝါပတ်သက်မှုနဲ.အဖမ်းခံရတယ်လို.လည်းသတင်းထွက်နေပါသည်၊တစ်ချို.ကျတော့၊အဖွဲ.တွင်အင်းအားပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်အကွက်ဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းသာဟုလည်းရေးသားပါသည်။
Burma arrests Australian newspaper publisher
Rangoon - Burmese authorities have arrested the Australian publisher of the Myanmar Times, an English-language weekly, sources confirmed Saturday.
Ross Dunkley was arrested at his Rangoon home Thursday on charges of overstaying his visa and possession of marijuana,aMyanmar Times employee said.
Dunkley isawell-known media figure in South-East Asia, having founded the Myanmar Times after launching Vietnam's first English-language weekly in the early 1990s, and also owns the Phnom Penh Post.
He is being held in Insein Jail, near the old capital Rangoon.//DPA
၁၉၆၂ ခနှစ်ကတည်းသန္ဓေးတည်လာခဲ့တဲ့နေဝင်ဦးဆောင်သောစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို(၁၉၈၈)လူထုတိုက်ပွဲဖြင့်ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အ တိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ၏အသုံးမကျမှု၊ဗမာစစ်တပ်၏ကလိမ်ကကျစ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်နစ်မှပြည်သူများမလွတ်မြောက်နိုင်
ရှိပါတယ်ခင်ဗျား၊သူ.နာမည်က Mohammed ELBaradei မိုဟာမက်အဲလ်ဗရာဒိုင်းပါ၊သူကလည်းနိုဘဲလ်ဆုရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်၊ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးပေါ့၊သို.သော်၊သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကျော်ကြားနေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊အာဏာရှင်ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရဲ တဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးပြတ်သားစွာတိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ၊ဒါဆိုရင်၊စစ်အစိုးရကိုကျနော်၊ကျမတို.ဘယ်တော့မှထိပ်တိုက်ရင်
ခဲ့ပြီးခေတ်မှီတယ်၊မူဆလင်ယဉ်းကျေးမှုအရလည်းဗမာစစ်တပ်လိုကလိမ်ကကျစ်မလုပ်တတ်ဘူး၊ဒါကြောင့်၊စစ်တပ်က နေမူဘာရက်နန်းတော်ကိုဝင်မွှေးပြီးမူဘာရက်နှုတ်ထွက်အောင်ဖိအားပေးခဲ့သည်၊ရှင်းရှင်းပြောရရင်၊အီဂျစ်စစ်တပ်ကဗမာစစ်တပ်လို ခွေးအဆင့်အတန်းမဟုတ်၊ယုတ်မာတဲ့အကျင့်မပါလို.ပါ။
နေကြပါသည်၊ဤအချက်ကိုလူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Abdel-Rahman Samir အက်ဒဲလ် ရာမန်း ဆမီး ကကျနော်တို.ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုဟာအခုဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအသွင်းကူးပြောင်းရေးအတွက်စစ်တပ်နဲ.ညှိနှိုင်းရမည့်အဆင့်သို.ရောက်ရှိနေပြီ၊အပြောင်း
“ကျမတို.လွတ်မြောက်ပြီ၊ Finally we are free” ” အခုအချိန်မှစ၍နောက်အုပ်ချုပ်မည့်သူများကလည်းပြည်သူတွေစွမ်းတယ်ဆိုတာ သိသွားမယ် "From now on anyone who is going to rule will know that these people are great."”ကျနော်တို.လုပ်ချလိုက်ပြီ၊ We made it”
ဤကဲ့သို.၊ဖြတ်လေးဖြတ်စစ်ဗျူဟာကိုအကြမ်းသမားစစ်အုပ်စုဘက်မှ လက်ဦးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လိုက်ခြင်းသည်မြို.ပေါ်ပျောက် ကျားစစ်နှင့်စစ်ဆင်ရေးကို တားဆီသည့်ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်လိုက်ရပါသည်၊တိုင်းရင်းသားတပ်များအနေဖြင့်ဖြတ်တောက် နည်းအပါအဝင်နောက်ကျောရိုက်ချိုးနည်းတို.ကိုအချိန်မှီအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်အုပ်စုနအဖစစ်တပ်အားကေအိုင်အိုတုံ.ပြန်ချက်အပေါ်ဝတပ်မတော်ထောက်ခံ Wa Leaders support Kachin Independent Army (KIA) responses to state sponsored Burma terrorist troop led by Than Shwe and Maung Aye
Wa Leaders support Kachin Independent Army (KIA) responses to the state sponsored Burma terrorist troop led by Than Shwe and Maung Aye
နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်အုပ်စုနအဖစစ်တပ်အားစစ်ရေးအရကေအိုင်အိုတုံ.ပြန်ချက်သည်မှန်ကန်သည့်လုပ်ရပ်ဟုဝခေါင်းဆောင်ကပြောကြားသည်၊ သောင်းကျန်းသူဗမာစစ်တပ်အနေနဲ.အကယ်၍အင်းအားအလုံးအရင်းနဲံ.ထိုးစစ်ဆင်လာပါကဝတပ်မတော်အနေဖြင့်ကေအိုင်အို ကိုကူညီမယ်ဟုလည်းပြောကြားသွားပါသည်၊ဖက်ဒရယ်ပေါ်ထွန်းကော်မတီခေါ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မှာဝတပ်မတော်ပါဝင်ခြင်းမရှိ သော်လည်းကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကြောင်း၊အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုထဲကလူတွေပဲဦးသိန်းစိန်းကသမ္မတဖြစ်ပြီးတော့၊သန်းရွှေ၊ မောင်အေးစသည့်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်သမားခေါင်းဆောင်တွေကသာသောင်းကျန်းသူစစ်တပ်မှာဆက်လက်အာဏာချုပ်ကိုင်ထား
ရှိသဖြင့်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ.တိုင်းရင်းသားတပ်များအကြားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖြစ်ဖို.အလာအလာသိပ်မရှိကြောင်းပြော ကြားသွားပါသည်၊ဝတပ်မတော်သည်စစ်တပ်အင်းအားအနည်းဆုံးသုံးသောင်းရှိပြီးသန်းရွှေ၊မောင်အေးဦးဆောင်သောနိုင်ငံတော်အ ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလွဲရင်ဗမာပြည်မှာအင်းအားအကြီးမားဆုံးတပ်မတော်ဖြစ်သည်။
ကနေ.ညနေ ၆ နာရီမှာသောင်းကျန်းသူဗမာစစ်တပ်မှမြစ်ကြီးနားအခြေစိုက် တပ်ရင်း ၂၁ နှင့်မန်းစီးအခြေစိုက် ခလရ ၃၁၇ တို.အင်းအားဖြည့်ဆည်းတက်လာပြန်သဖြင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါသည်၊ကေအိုင်အိုဘက်ကတော့၊တပ်တွေအား လုံး Alert လုပ်ထားပြီးတိုက်ပွဲကြီးငယ်အခြေအနေအပေါ်အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်၊နှစ်ဘက်စလုံးညှိနှိုင်းမည့်အနေအထားမရှိသေးပါသဖြင့်ရက်
BAYDA Institute held Course Completion and Certificate Awarding Ceremony on 4th February 2011 for the course of Introduction to Social Sciences, Course No ISS 1- 1/2011 and course No. ISS 1- 2/ 2011.
People Leader ,democracy leader Daw Aung San Suu Kyi sent aletter of wisdom and encouragement to the students who had studied Social Sci...ence at the BAYDA Institute.
U Win Tin also gavealetter of wisdom and encouragement to the students as well as U Pu KyinShinHtan ,CRPP ( Chin Ethnic) , U Saw Nai Nai , U Phyar Pon Ni Lon Oo , Monywa U Aung Shin .
The Ceremony began at 2, 30 pm in the afternoon .The Ceremony was attended by Vice Chairman of NLD U Tin OO , and CEC members U Han Tha Myint ,DR. Daw May Win Myint, U Aung Than Nyunt.
The Ceremony began with students singing the song " We Shall Overcome "the Speeches of U Tin oo , U HanTha Myint , U Aung Kyi Nyunt, U Hla Myo Myint , Lawyer of Daw Aung San Suu Kyti and U Win Cho who went to Giri Disaster Area with CRPP members.
Then Information Officer Ma Eaint Thiri Thu explained about BAYDA Institute and the Principle of BAYDA Institute U Myo Yan Naung Thein gaveaspeech.
Representatives of students Talked about thier experience and certificates were awarded to students by the principle U Myo Yan Naung Thein.
A student gaveathank-you speech and Daw Mya Nandar Thin,Teaching Center Manager explained briefly about the difficulties faced by BAYDA Institute.
The Ceremony was closed with the song " We shall overcome" 38 students successfully complected Social Sciences courses (ISS- 1/ 1/ 2011 and ISS 1-2/ 2011)
ဗိုလ်မှူးမန်ရောဘတ်ဇန်း၊ဗိုလ်ချုပ်မြ၏သား၊ဗိုလ်မှူးနဒါမြတို.နဲ.အတူဗုဒ္ဓဘသာရဟန်းတော်တစ်ပါးစုံညီတက်ရောက်သည့်နေ.ထူးနေ.မြတ်၊ ဗိုလ်မှူးမန်းရောဘတ်ဇန်းဟာအသက်အရွယ်အားဖြင့်ကြီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကရင်လူမျိုးများဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံနေရသည်ကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘဲတော်